Ọnọdụ maka oku gị ka emee ihe | Martech Zone
Anyị na-anwale Oku ka Action na saịtị anyị na ndị ahịa anyị. Nke a nwere ike ịbụ ọkwa elementrị, mana enwere ọtụtụ ebe iji nye ụzọ itinye aka na weebụsaịtị. Aga m agba ndị ụlọ ọrụ ume ka ha tinye ọnọdụ ndị a n'ime isiokwu njikwa ọdịnaya ha ka ọ dịrị ndị azụmaahịa mfe ịgbakwunye, melite ma nwalee oku dị iche iche iji rụọ ọrụ. Ọnọdụ CTA maka saịtị gị:
Na saịtị n'obosara - inwe ọnọdụ na-agbanwe agbanwe site na ibe ruo na peeji ebe onye ọrụ nwere ike ịtụ anya ịhụ oku ime ihe dị mkpa. Nke a nwere ike ịbụ otu ogwe gafee ibe, slide down / up panel (dị ka ngalaba ndenye aha anyị), ma ọ bụ popover div. Lelee Piano na Flash ị ga-ahụ otu panel n'elu n'okpuru ụkwụ gafee saịtị ahụ Debanye aha taa.
Na nso - ndị mmadụ na-enyocha peeji dị na ụkpụrụ F site n'aka ekpe gaa n'aka nri. CTA sidebar bụ ezigbo ụzọ iji jide ọhụụ ndị mmadụ ka ha na-agụ ihe ederede na ọdịnaya peeji. Ego ego ma ọ bụrụ na ịnwere ike ịme oku na-eme ka ọ dị mkpa maka ọdịnaya ahụ n'onwe ya. Anyị na-etinye CTAs na sidebar anyị ma a na-ebipụta ha nke ọma dabere na ụdị post bipụtara na.
Na Iyi - ọ bụ ntakịrị ihe na-egbochi, mana itinye oku ka ị mee ihe n'ime ọdịnaya gị, ma ọ bụ site na njikọ, bọtịnụ ma ọ bụ CTA, nwere ike hụ na a hụrụ ya. Imirikiti usoro njikwa ọdịnaya ga-enye gị ohere nyocha ọdịnaya gị, yabụ ịnwere ike ịgbakwunye oku iji mee mkpado paragraf ole na ole na ma ọ bụ tupu / mgbe ọdịnaya peeji gị gachara.
Jide n'aka na ị na-agụkwu ihe ịghọta F-Okirikiri nhọrọ ukwuu na Webdesigntuts +:
Anyị ahụla nsonaazụ dị ịtụnanya na ngalaba ndenye aha anyị na-agbada Martech Zone. Ọ rụrụ ihe karịrị 400% ka mma karịa ndenye aha anyị na-iyi iji mee ihe na ntọala nke posts anyị. Ekwenyesiri m ike na enwere ụfọdụ mgbanwe anyị nwere ike ịnwale iji melite nsonaazụ, mana data mbido na-enye data na ka anyị na-egbochikwu, ka mma nsonaazụ. Anyị na-agbasosi ike imegide omume a ebe anyị achọghị n'ezie ida ndị na-ege anyị ntị n'ihi na anyị na-ama ụra mgbasa ozi ebe niile… mana ọ bara uru ịkọ.
Tags: kpọọ ka emekpọọ gaa rụọ ọrụctaanya nsusof okirikiri nhọrọ ukwuuna iyi oku ime omumeinline mgbasa oziSitewide oku omume
Dos na Ekweghi ka ahia ahia
Ọkt 10, 2013 na 8:29 PM
Kedu ngwa mgbakwunye ị jiri nweta mmanya optin na elu blog ahụ?
Ọkt 15, 2013 na 9:33 AM